किन एक आईप्याड किन्नुहोस् र अर्को ट्याब्लेट होइन? | आईफोन समाचार
किन एक आईप्याड किन्नुहोस् र अर्को ट्याब्लेट होइन?
आईप्याड समाचार | | iOS 7, आईप्याडका एयर
ट्याब्लेटहरू हो, स्मार्टफोन पछि, उपकरणहरू जुन हालका बर्षहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको स in्ख्यामा बढेको छ। एप्पलले आफ्नो पहिलो आईप्याड मोडल सुरू गरेदेखि नै "चाहिन्छ र गर्न सक्दैन" भनेर विचार गरेको कारण धेरैले आलोचना गरेका छन्, "आईप्याड किलर" प्राप्त गर्ने निर्माताहरूको रेस अझै पनि जारी छ, र वर्तमान अफर धेरै विविध छ, र ठूला ट्याब्लेटहरूको साथ जुन कुनै समस्या बिना एप्पल आईप्याडमा खडा हुन सक्छ। तर,किन आईप्याड किन्नुहोस् जब त्यहाँ अरू बढी सस्तो ट्याब्लेटहरू छन् कसले "उही प्रस्ताव" गर्न सक्छ? म यसलाई एक लेखमा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु।
1 उत्कृष्ट गुणवत्ता र डिजाइन
2 सकल शक्ति र उच्च स्वायत्तता
3 अनुप्रयोग स्टोर, कुनै अन्य जस्तो आईप्याडको लागि एक अनुप्रयोग स्टोर
4 आईओएस,, नयाँ मोबाइल अपरेटिंग प्रणाली
5 असीमित मल्टिमेडिया संभावनाहरू
6 उत्पादकता समस्या छैन
7 यसको आफ्नै पूर्ण ईकोसिस्टम
8 त्यहाँ कमजोरीहरू पनि छन्
उत्कृष्ट गुणवत्ता र डिजाइन
जब हामी प्राविधिक उपकरणहरूको बारेमा कुरा गर्छौं हामी जहिले पनि प्रोसेसर, र्याम, GPU, सेन्सर, ब्याट्री ... तर हेर्छौं बाह्य पक्ष केहि मौलिक छ, कम्तिमा यो मेरो मामला मा छ। र यसमा आईप्याड अहिलेको लागि बेमेल छ। यसको समाप्त मात्र आश्चर्यजनक छ, र आईप्याड एयरको नयाँ डिजाइनको साथ यो अझ सुधार गरिएको छ। यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि यसको वजन र मोटाईको एक उपकरणले यति शक्ति र स्वायत्तता राख्न सक्छ। एल्युमिनियम ब्याक कभर सामग्रीको गुणस्तरको प्रमाण हो जुन आईप्याड बनाईएको छ।
सकल शक्ति र उच्च स्वायत्तता
नयाँ A7 प्रोसेसरको साथ हातमा, आईप्याड एयरको शक्ति बजारमा हालको कुनै पनि ट्याब्लेटको भन्दा राम्रो छ। यसका लागि विशेष रूपमा उसको लागि डिजाइन गरिएको मोबाइल अपरेटि system प्रणाली थप्न आवश्यक छ, जसले उसलाई हार्डवेयरले प्रस्ताव गरेको सम्भावनाहरूको पूर्ण फाइदा लिन गर्दछ। आईओएस ले एक मुठीभर नयाँ सुविधाहरू ल्याएको छ साथ साथै एक प्रमुख कस्मेटिक परिवर्तन। आईप्याड एयरमा यसको प्रदर्शन सनसनीखेज छ, र यो हामी मांग खेलहरू खेल्दा वा पूर्ण HDD फिल्महरू खेल्दा देखाउँदछ। र यी सबै यसलाई चार्ज गर्ने बारे चिन्ता नगरिकन, किनकि यसले कुनै समस्या बिना गहन प्रयोगको दिनको सामना गर्न सक्षम छ।
अनुप्रयोग स्टोर, कुनै अन्य जस्तो आईप्याडको लागि एक अनुप्रयोग स्टोर
अनुप्रयोग स्टोरको बारेमा धेरै भन्नु छैन, आज सबैभन्दा ठूलो अवस्थित अनुप्रयोग स्टोर। Google Play ले धेरै बृद्धि भएको छ, भर्खरका वर्षहरूमा App Store भन्दा छिटो, तर एन्ड्रोइड स्टोरले अझै पनि यसको ट्याब्लेटहरूको लागि डिजाइन गरिएका अनुप्रयोगहरूको बारेमा धेरै ध्यान दिँदैन, र उनीहरूले स्मार्टफोन स्क्रीनहरूको लागि डिजाइन गरिएको अनुप्रयोगहरूको लागि समाधान गर्नुपर्नेछ। ।, ट्याबलेटहरू होईन। अनुप्रयोग स्टोरले screen 475.000,००० अनुप्रयोगहरू समावेश गर्दछ आईप्याड स्क्रिनको लागि अनुकूलित, यति धेरै मध्ये तपाईंले पक्कै पनि तपाईंलाई आवश्यक एक पाउनुहुनेछ।
के तपाई गुगल सेवाहरूको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ? कुनै समस्या छैन, किनकि इन्टरनेट जायन्टले आईओएसका लागि यसको सबै सेवाहरूको अनुप्रयोगहरू विकास गरेको छ, त्यहाँ विरोधाभास पनि छ कि ती मध्ये केही Android को तुलनामा iOS मा सुधारको साथ अपडेट गरियो।
आईओएस,, नयाँ मोबाइल अपरेटिंग प्रणाली
IOS7जागृत प्रेम र घृणा छ। प्रणालीको सौन्दर्य परिवर्तनले सबैलाई मन पराउँदैन, तर नयाँ थपिएको कार्यहरू कुनै श doubt्का बिना एक सुधार हो। नियन्त्रण केन्द्र, कुञ्जीहरू र अन्य पहुँच डाटा सि Face्ख्रोनाइजको लागि नयाँ कार्यहरू, फेसटाइम, आईमेसेज, आईक्लाउड, एयरड्रप, सिरि ... फंक्शनहरू हुन् जुन तपाईं केवल आईओएस उपकरणसँगै रमाउन सक्नुहुन्छ। र यी सबै आईओएसको स्थिरता र प्रदर्शनको साथ। साथै, नयाँ एप्पल उपकरणको साथ तपाईंलाई त्यो थाँहा हुन्छ धेरै वर्षको लागि तपाइँ तपाइँको अपरेटिंग प्रणालीमा अद्यावधिकहरूको मजा लिन सक्षम हुनुहुनेछ, नि: शुल्क, र एक साथ सबैको लागि।
असीमित मल्टिमेडिया संभावनाहरू
केवल आईओएस उपकरणको साथ तपाईसँग आईट्यून्स स्टोरको पहुँच छ, संसारमा सबैभन्दा ठूलो मल्टिमेडिया सामग्री स्टोर। चलचित्र, श्रृंखला, संगीत, पुस्तकहरू ... सबै चीज तपाईको हातको हत्केलामा। के तपाईं मल्टिमेडिया सामग्रीको मजा लिन एप्पल सेवाहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्न? कुनै समस्या छैन, त्यहाँ अनगिन्ती अनुप्रयोगहरू छन् जसले तपाईंलाई कुनै पनि ढाँचामा भिडियोहरू खेल्न अनुमति दिन्छ, .mkv वा .avi सहित, र UPnP सर्भरहरू र स्ट्रिममा जडान।
IOS जहिले पनि "आरोप" गरिएको छ केहि वेबसाइटहरूबाट भिडियो प्ले गर्न सक्षम भइरहेको छैन, मिल्दो ढाँचामा नभएको लागि (जस्तै फ्ल्यास जस्तै, उदाहरणका लागि)। भाग्यवस यो अब कुनै समस्या छैन, र त्यहाँ अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई वेबसाइटहरूमा अपलोड गरिएका भिडियोहरूको मजा लिन कुनै पनि समस्या बिना अनुमति दिन्छ।
उत्पादकता समस्या छैन
¿तपाइँ आफ्नो आईप्याड काम गर्न चाहानुहुन्छ? समस्या छैन। आईक्लाउड मार्फत समक्रमणले तपाईंलाई कहिँबाट पनि कागजातहरूसँग काम गर्न सक्षम हुन अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंसँग म्याक, आईफोन वा आईप्याड छ भने तपाईं तिनीहरू मध्ये कुनैबाट कागजात पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर यदि होईन भने यो कुनै समस्या छैन, किनकि आईक्लाउड.कॉमबाट तपाईं तिनीहरूमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूमा काम गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं केवल इन्टरनेट पहुँच को साथ एक कम्प्यूटर आवश्यक छ। साथै, तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि सेप्टेम्बर १ सम्म खरीद गरिएको कुनै पनि आईओएस उपकरणले सबै iWork र iLife अनुप्रयोग नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्दछ।
यसको आफ्नै पूर्ण ईकोसिस्टम
कुनै पनि एप्पल उपकरणसँग यसको डिस्पोजलमा सामानहरूको आफ्नै इकोसिस्टम हुन्छ। स्ट्यान्ड्स, कभरहरू, कीबोर्ड, वाइफाइ हार्ड ड्राइभहरू ... यहाँसम्म कि दूरबीनहरू, तराजूहरू वा रक्तचाप मोनिटरहरू एप्पल स्टोरमा फेला पार्न सकिन्छ। यो मानसिक शान्ति हो, यद्यपि, प्रायः जसो मामलाहरूमा तपाईले गर्नु पर्छ तिनीहरूका लागि उच्च मूल्य तिर्नुहोस्।
त्यहाँ कमजोरीहरू पनि छन्
अवश्य पनि त्यहाँ नकारात्मक बिन्दुहरू छन्। यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो USB वा माइक्रोएसडी मेमोरी तपाईंको ट्याब्लेटमा घुसाउन सक्षम हुन आवश्यक छ, वा जसले कुनै पनि वेबसाइटबाट संगीत डाउनलोड गर्न र तपाईंको ट्याब्लेटको उपस्थितिलाई अनुकूलित गर्न चाहान्छन्, आईप्याड उपकरण तपाईंले खोजिरहनु भएको उपकरण होइन। । एप्पलले यसको अपरेटिंग प्रणाली र उपकरणहरूमा केही प्रतिबन्धहरू राख्छ, र त्यो केहि प्रयोगकर्ताहरूको मनपर्नेमा नहुन सक्छ। मैले सुरूमा भनेझैं बजारमा ट्याब्लेटको आपूर्ति विशाल छ, र एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करणहरूको गुणस्तर र यसको केहि ट्याब्लेटले उनीहरूलाई एप्पलको आईप्याडसँग तुलना गर्दछ। र यसको मूल्य नकारात्मक बिन्दुको रूपमा नबिर्सौं।
यी मेरा कारणहरू हुन्, तपाईं तिनीहरू मध्ये केही (वा धेरै) साझा गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं मेरो रायसँग सहमत हुनुहुन्न। यदि तपाईं आफ्नो अभिव्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, अरूलाई आदर गर्ने, तपाइँ यहाँ टिप्पणी गर्न स्वागत छ।
अधिक जानकारी - आईप्याड एयरको पहिलो बेन्चमार्कले आईप्याड,, भिडियो एक्सप्लोरर भन्दा% ०% बढी प्रदर्शन देखाउँदछ: कुनै पनि वेबबाट भिडियोहरू प्ले गर्नुहोस्। हामी lic लाइसेन्स राफल।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» किन एक आईप्याड किन्नुहोस् र अर्को ट्याब्लेट होइन?
उत्कृष्ट, हामी अनुप्रयोग स्टोरमा चाँडै नैb64 बिटहरूको लागि अप्टिमाइज गरिएको अनुप्रयोगहरू हेर्न चाहन्छौं, यद्यपि आईओएस said को भनेको ब्याट्री खपत गर्ने पागल चीज हो।
लिन्डालाई जवाफ दिनुहोस्
ठिक छ, मलाई थाहा छैन कि यो आईप्याड एयर वा आईफोनमा कस्तो हुनेछ, तर मसँग आईओएस .7.0.3.०. with को चौथो जेनरेशन आईप्याड छ र सत्य यो हो कि कन्फिगर गरिएको आईओएस had मा भएजस्तो छ, म यसमा फरक देखिन ब्याट्री खपत 😉
राम्रोसँग कन्फिगर गरिएको, मैले आईओएस with का साथ मेरा उपकरणहरूमा उपभोगमा फरक देखिन।
एन्ड्रोइडका लागि एप्स भन्यो
डिजाइन मलाई शंका छैन कि यो धेरै व्यक्तिहरु को लागी धेरै उपयुक्त छ; मैले इमान्दारीताका साथ एउटा आईप्याड चलाएको छैन, निश्चित रूपमा मसँग अवसर छ, तर ईमानदारीसाथ अहिले सम्म तपाईं यी उपकरणहरू (ट्याब्लेट) ल्याउने एन्ड्रोइड संस्करणसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
एन्ड्रोइडका लागि अनुप्रयोगलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लेख मनपर्‍यो, यो एकदम उद्देश्यपरक देखिन्छ र मलाई लाग्छ कि यो राम्रो छ कि तपाईंले नकारात्मक पक्ष पनि समाहित गर्नु भएको छ यदि कसैले आईप्याड किन्न रुचि राख्दछ र यसको बारेमा धेरै स्पष्ट हुँदैन, त्यसैले उनीहरूले फाइदा र विपत्ति लिन सक्छन् can
किन आईप्याड किन्नुहुन्छ? साधारणतया किनभने एप्पलले बनाउने सबै चीज मिलिमिटरमा सोच्दछन् र ट्याब्लेट र स्मार्टफोन बनाउन अन्य ब्रान्डहरू मन पराउँदैन।
पिया नाति भन्यो
मिलीमीटरले सोचे कि तपाई युएसबी मार्फत फाइलहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न, उदाहरणका लागि कम्प्युटरबाट ट्याब्लेटमा फोल्डरहरू पूर्ण गर्नुहोस्। कि तपाईंसँग आन्तरिक फाईल छैन र हातमा फोल्डर अन्वेषक छैन। तपाइँसँग एनएफसी समर्थन छैन। तपाइँसँग युएसबी ओटजी समर्थन छैन। कि तपाईं एसडी कार्ड को लागी समर्थन छैन। यो सबै ताकि उनीहरूले तपाईलाई ट्याब्लेट किन्न बाध्य पार्छन् जसको लागि मोबाइल नेटवर्कमा स्थायी जडान चाहिन्छ र तिनीहरूले तपाईलाई टेलिफोन कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्न बल गर्दछन्।
Peña Nieto लाई जवाफ दिनुहोस्
म टेलिफोन कम्पनीहरूसँगको सम्झौताको साथ सहमत छैन। मेरो दुबै आईप्याड मध्ये कुनै पनि 3G जी को कनेक्टिविटी छैन, र म तपाईलाई आश्वसन गर्दछु कि म ती मध्ये धेरै जसो प्राप्त गर्दछु।
ब्याट्रीको सन्दर्भमा, एप्पलको धेरै toणी बाँकी रहेको छ ..., यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न सक्षम भएको छैन
Mb लाई जवाफ दिनुहोस्
आईप्याड ब्याट्री समस्या? कुन चाही?
एप्पल प्रोसेसरको गति बृद्धि गर्दैछ, स्क्रिनमा सुधार गर्दै, भण्डारण वृद्धि गर्दै, एक सुपर क्यामेरा बनाउँदै।
तर ब्याट्री अझै उही जीवन हो।
मलाई लाग्छ कि त्यो ठीक के हो राम्रो छ: अधिक शक्ति, थप स्क्रिन, सानो आकार, पातलो, हल्का र उही ब्याट्री।
मलाई थाहा छैन कि यो भौतिक विज्ञानको कानून हो वा होइन, तर अधिक शक्ति, अधिक उर्जा खपत, स्क्रीनको तीखोपनको मामलामा, अधिक ब्याट्री उपभोग आवश्यक छ, मलाई थाहा छैन यी एप्पलसँग कुनै पेटेन्ट छ कि छैन। जहाँ ब्याट्री सदाको लागि हो, तर यसले हामीलाई एक दिनमा एक दिन बाँच्न अनुमति दिन्छ
हे एमबीले तपाईंलाई के भन्न खोजिरहेको छ कि एप्पलले उपकरण पातलो बनाउँदछ, राम्रो स्क्रीनको साथ, बढी पावर, सानो र हल्काको साथ, यसमा अझै समान ब्याट्री लाइफ छ। तपाईंको तर्क मान्य हुनेछ यदि आईप्याड प्रत्येक पुस्तामा ब्याट्री जीवन कम भयो
आईप्याड जेलब्रोन हुन सक्छ र तपाइँ केही साना चीजहरू स्थापना गर्नुहुन्छ र परिणाम आश्चर्यजनक छ
मानुएल वायुसेना भन्यो
बुएनास टर्ड्स। मैले तपाईंको टिप्पणीहरू पढें र तिनीहरू सुसंगत देखिन्छन्, म अनुमान गर्दछु तपाईं एप्पल उपकरणहरूको बारेमा एकदम ज्ञानवान हुनुहुन्छ। यसैले म तपाईंलाई एउटा आईप्याड किन्नको सिफारिसको लागि सोध्न लेख्दै छु, हवा, रेटिना स्क्रिनको साथ मिनी ..., वा रेटिना स्क्रिन बिना मिनी।
मेरो माग महान छैन। उपयोगिता धेरै आधारभूत हुनेछ, फिल्महरू, इन्टरनेट, फोटोहरू, र थोरै। म आईप्याड एयर वा रेटिना स्क्रिनको साथ मिनीको बीचमा छु, जे भए पनि GG जी। वाईफाई सेल फोन बिना। तिम्रो बिचार के छ? अग्रिम धन्यवाद, र सबै भन्दा राम्रो
म्यानुएल वायुलाई जवाफ दिनुहोस्
र ios7 को लागि जेलब्रेक भर्खर बाहिर आयो
हो, मेरो राय तपाईको लागि उपयोगी छ किनकि मैले and आईप्याड र ट्याब्लेट लिएको छु। (वर्तमानमा केवल एयर प्रयोग गरिएको र)) म मिनी रेटिना स्क्रिन सिफारिस गर्दछु।
यो असाधारण प्रदर्शन को उम्मीद छैन जो मान्छे को लागी धेरै सहज र व्यावहारिक छ। मसँग रेटिना स्क्रिन बिना सामान्य मिनी छ र आमा हेर्नुहोस्
Rodri लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले भर्खर एउटा आईप्याड एयर किनेको छु र मलाई यो मनपर्दछ, मसँग पनि एक मिनी र have छ, त्यसैले मलाई के भनेको हो भनेर मैले थाहा पाएँ जब म भन्छु कि आईप्याड एयर आश्चर्यजनक छ।
एप्पलले आईओएस for को लागि यसको रिमोट अनुप्रयोग अपडेट गर्दछ
आईक्यू मोबाइल, आईफोनको लागि वायरलेस चार्जर